किन घट्याे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य ? यस्ता छन् कारण - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार किन घट्याे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य ? यस्ता छन् कारण
किन घट्याे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य ? यस्ता छन् कारण
नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंककाे आइपिओ दाेश्राे बजारमा काराेबार हुन थालेपछि लगातार ९ दिनसम्म सकारात्मक सर्किट लाग्याे । तर १० औँ दिनमा आएर एक्कासी नकारात्मक सर्किट लाग्न पुग्याे । अधिकांश लगानीकर्ताहरू हताेत्साहित नै बन्न पुगेकाे देखियाे ।
बजारमा नयाँ लगानीकर्ताकाे अधिक प्रवेश भएकाे अवस्थामा कुनै कम्पनीकाे एक्कासी नकारात्मक सर्किट लागेर लगानी डुब्दा हताेत्साहित हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर लगातार बढिरहेकाे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्यमा कसरी लाग्याे त नकारात्मक सर्किट ? याे विषयमा भने केही ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ।
१. लगातार ९ दिनसम्म सकारात्मक सर्किट लागिरहँदा धेरै लगानीकर्ताहरूले थुप्रै कित्ता शेयर किनिसकेका थिए । त्यही लगानीकाे प्रतिफल लिनका लागि हतारमा बेचेकाे भएर पनि शेयर मूल्य घट्न पुगेकाे देखिन्छ ।
२. लगातार ९ दिनसम्म शेयर बेच्नेभन्दा किन्ने लगानीकर्ताहरूकाे भीड लाग्ने गरेकाे थियाे तर १० औँ दिनमा भने किन्ने लगानीकर्ताहरूकाे अत्यधिक कम उपस्थिति देखिएकाे थियाे । बजारकाे नियम नै हाे कि डिमाण्भन्दा सप्लाइ बढी भएकाे अवस्थामा मूल्य घट्छ ।
बजार केही तलमाथी भएपनि लगातार तल या लगातार माथी रहिरहँदैन । त्यसैले यस्ताे अवस्थामा दुःखी भएर हतार हतार बजारबाट बाहिरिन खाेज्नु हुँदैन । शेयर बजारमा धैर्य गर्न सक्नुपर्छ ।केही समय अघिदेखि दाेश्राे बजारमा काराेबार भैरहेकाे नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकाे शेयरमूल्य हाल १४०० काे हाराहारीमा छ । दाेश्राे बजारमा काराेबारमा आएकाे केहीसमयपछि याे कम्पनीकाे शेयर मूल्य ५०० काे हाराहारीमा भएकाे अवस्थामा अहिलेकाे जस्तै बजारमा हलचल मचाएकाे थियाे । तर त्यसपछि उकालाे लागेकाे यसकाे मूल्य १८०० सम्म पुगेकाे थियाे । कतै इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे पनि पुनर्बीमाकाे जस्तै हुने त हैन ? भन्ने जिज्ञासाहरू पनि बजारमा सुन्न पाइन्छ ।
अर्काे हतास हुननपर्ने कारण भने नेपाल सरकार लगायत अन्य ठूला कम्पनीहरूकाे लगानी भएकाले पनि याे कम्पनी सुरक्षित कम्पनीकाे रूपमा रहेकाे छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य कम्पनी नभएकाे र नेपाल सरकारले लगानी गरेका अन्य कम्पनीहरूकाे शेयर मूल्य पनि राम्राे रहेकाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे पनि पक्कै मूल्य लगातार घट्दैन । त्यसैले हतास नभइ प्रतिक्षा गराैँ र राम्राे नाफा बुक गराैँ ।
Previous articleप्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए स्थायी कमिटी बैठक
Next articleटिएमएस बाट नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक ‘निफ्रा’ गायब
कोरोनाबाट आँखारोग विशेषज्ञ डा पूज्यश्री कार्कीको निधन
इमर्जिङ्ग नेपालको आइपीओ आजदेखि विक्री खुला, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्ने? कसरी दिने आवदेन